दशकदेखि एउटै कार्यालयमा, पहुँच हुने प्रहरी काजमा ! « मेचीखबर
दशकदेखि एउटै कार्यालयमा, पहुँच हुने प्रहरी काजमा !
२४ असार २०७३, शुक्रबार ०६:५१
झापा । महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुमा प्रहरीको दरबन्दी एक सय ४१ जनाको हो । तर, महाशाखामा दुई सय ११ प्रहरी कार्यरत छन् । तीमध्ये करिब एक सय प्रहरी काजमा आएका हुन् भने महाशाखामै दरबन्दी भएका करिब ५० जना अन्यत्रै काजमा बसेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र मातहतमा तीन हजार एकजनाको दरबन्दी छ । तर, परिसरमा दुई हजार नौ सय ५६ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये पनि डेढ सय काजमा छन् ।
परिसरको दरबन्दीका करिब एक सय प्रहरी भने काठमाडौंबाहिर काजमा छन् । प्रहरीका हरेकजसो कार्यालयमा काज विकृति छ । प्रहरीमा करिब पाँच हजार सातजना काजमा कार्यरत रहेका छन् ।
काजमा बस्ने प्रहरी सोर्सफोर्सवाला हुने भएकाले विकृति समाधान हुन पहल नभएको स्रोत बताउँछ । कतिपय हाकिम रिझाएर त केही नेताको सोर्सफोर्समा काजमा बस्ने गरेका छन् । काज मिलाउन ठूला नेताहरूको पनि दबाब आउने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउछन् ।
नेपाल प्रहरीमा सामान्यतः एक–एक वर्षमा सरुवा हुन्छ । तर, केही प्रहरी दशकभन्दा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बस्दै आएका छन् । आकर्षक कार्यालयमा काज मिलाएर बस्ने विकृति प्रहरीमा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।